Nezvedu - Shenzhen Sinsche Technology Co, Ltd.
Vashandi vedu vane hunyanzvi vane makore mazhinji ruzivo muminda yeindasitiri sainzi, Analytical Chemistry uye Injiniya. Kubva kuInternational Headquarter muShenzhen Guangdong, tinopa Zvepasi rose Kutengesa uye technical Support, Yekutsvagisa uye Yekusimudzira Laborator, Yekudzidzisa Zvivakwa, Kugadzira uye Warehousing. Matunhu Mahofisi uye maAgents akasarudzika akaonekwawo uye akasarudzwa kuti ape rovedzo yemuno, rutsigiro rwehunyanzvi uye kutengesa kwedunhu.
KuSinsche, isu tinoshingairira muyero wepamusoro mukuedza kudarika vatengi vedu zvavanotarisira. YeduISO9001: 2015 Certification inovimbisa isu takazvipira kune Hwakanaka uye Kuchengetedzwa kweZvedu zvigadzirwa, inova nechokwadi kuti zvigadzirwa zvedu zvinounzwa zvakakwana, pa-nguva, uye zvinokwikwidza mutengo, uye pakupedzisira, inova nechokwadi chekuti hatizorohwe pane vatengi vatengi, chigadzirwa kudzidziswa uye kuenderera mushure mekutengesa rutsigiro .
Basa Redu: Kuona mhando yemvura kune vanhu pasirese.
Kubva kudzimbahwe redu kuChina tinogadzirisa netiweki yepasirese yeSales, R&D, Kugadzira uye nzvimbo dzekuparadzira kugadzira, kugadzira uye kugadzira mhando yemhando yepamusoro yezvigadzirwa zvekuongorora mvura.
Isu tinopa turnkey mhinduro kune yako yese ongororo uye yekutarisa zvido, uye tichishandisa yedu yakazvipira timu yehunyanzvi isu tichashanda newe kuti unzwisise zvaunoda, kupa mhinduro uye kuteedzera yekutanga kirasi rutsigiro uye uye kana iwe paunenge uchitsvaga.
Kuferefeta uye kutsvagurudza kwedu kuongororwa kwemvura kwakatungamira mukuvandudzwa kwePortable, Laboratory uye ne-on-line yakavakirwa michina yekuongororwa kwakaringana kwemiparamende dzakasiyana dzinowanikwa mumvura.
Kuenderera mberi kwekudyara mune yedu Yekutsvagisa uye Yekuvandudza vashandi uye zvivakwa zvinovimbisa kuti isu tinoramba tiri panotungamira tekinoroji mumunda medu.